Saraakiisha Alshabaabkii ka dagaalamayey buuraha Galgala oo u gudbey deegaamo Somaliland katirsan.
September 12, 2020 Xuseen 7
Saraakiil iyo dagaalyahano katirsan kooxda Alshabaab ee ka dagaalanta buuraleeyda Galgala ee gobolka Bari ayaa lagu soo waramayaa inay gudaha u galeen deegaamada Somaliland kadib cadaadis kaga yimid ciidanka Puntland.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay kana tirsan laamaha ammaanka ee Puntland ayaa sheegay in ragga katirsan Alshabaab ee ka soo kicitimay Galgala una soo gudbey Somaliland ay kujiraan saraakiil caan ah inkastoo aan tiradooda la shaacin.
Maamulka Somaliland oo helay macluumaadkaasi ayaa la sheegay inay heegan buuxa galeen, waxaana dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ay ka arrimiso.
Cabsi ka taagan magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, ciidamo lagu soo daad gureeyey & xogo weeraro qorshaysan oo la helay
Puntland waxa ay marar badan maamulka Somaliland ku eedaysay inay taageero martigelin, dhaqaale iyo millatiba siiso kooxda Alshabaab oo Puntland kula dagaalanto gobolka Bari.
Awalba meesha ayaay ka yimaadeen, haddana waay guryo noqdeen!!!!
Qoslaaye Gaylan says:
Somaliland waa dawlad hanaqaadday oo gaamurtay, kuna filan ammaankeeda. Ninka maqaalkan soo qoray waxaan u sheeg ayaa in uu dhulka Pu tland ka sifeeyo kooxdaas dilaaga ah. Inta kaa soo baxsatana Somaliland ayaa cagta marinaysa.
Meesha gabbaad iyo magangelyo ayey u aadeen, waxaana kaga sii horreeyey naagahoodii iyo carruurtoodii ioo ay muddo la joogi doonaan. Su’aashu waxaa weeye goorma ayey Puntland kusoo noqon doonaan kadib markii ay soo nastaan oo soo hub aruursadaan?
Kuwiinna taageersan maamulka Hargeysa haddii aad afka abur ka keentaan amase is-giriirixisaan si aad u inkirtaan xiriirka Somaliland iyo Al-Shabaab, yaa idi
n ka dhegaysanaya.
Weligiin ma maqasheen Al-Shabaab oo cid wax ku yeeshay gudaha Itoobiya? Misel kunka kilomitir (1000km) ee xadka u dhexeeya Somalia iyo Itoobiya, mitir kasta waxaa taagan oo ilaaliya askari Itoobiyaan ah? Arrinta xiisaha lihi waa in Al-Shabaab kula dagaaallamaan Itoobiyaanka gudaha Somalia! Qurshuhu waa in la burburiyo qaybtii Talyaanigu gumeysan jirey ee Somalia (Italian Somaliland).
Qorshaha Al-shabaab uga baaqsadeen inaysan wax dhib ah ka geysan gudaha Somaliland iyo Itoobiya waa mid isku xiran oo hore la isula meeldhigay.
Ninkii shalay isku garxiyey masjidka Kismaayo ee dilay marxuum Shaafi Raabi Kaahin, haddii uu doono inuu sidaa ka sameeyo Hargeysa amase Addis Ababa yaa joojin kari lahaa oo aan Alle ahayn?
Beenaale fulaya inaad tahay baad noo cadaysey, hadii aad amaanka maatadada ilaashan kari weydey Somaliland hakula soo galgalan tabcaanimadaada iyo fulaynimadaada.
Alshabaab waa u cadow cidwalba laakiin adinka ayay guryihiina dhex joogaan meelwalbana way kula joogaan waayo waad isu edeegsataan Yaa Mooryaan, ninba ninka uu necebyahay ayaad isugu adeegsataan Alshabaab.
Bal sheekada Galgala nooga waran, waa sheeko Gaalada lagusoo baryo muumulka Majeerteenia. Mor then 10 years ayay Alshabaab ku jirtaa galgala,maxaa hortaagan inaad ka sifeyso, anaa kuu sheegaya waxaad tihiid fulayo afka ka nacnacleeya waxna iska celinkarin Eedana Cidkale dusha ka saara.
Duqa is eerso cidna ha eersan,
Somaliland way ka digtoontahay cadow walba oo xuduudeeda soo gasha waa dad feejigan oo aan laga dhex kuluumaysan karin sidiina oo kale.
Kulahaa way wada shaqeeyaan waa beentiinii iyo qiiq isku qarintii laydinku yaqaaney Fulayahow Wax mataraha ahi.
‘Al-Shabaab 10 sano ayey Galgala ku jiraan’. Maxay xagga Somaliland marna ugu tallaabi waayeen?
Dhanka xadka Somaliland waxaa idiin jooga kumanaan askari iyo tangiyaal; xadkiinna oo dhan waxaa ku aasan miino jalfis ah; waxaa ku xiran Camero-yoonka xasaasiga ah ee dhkhsaha badan. Waxaa dulheehaaba tobonaan drones.
Ninkii Al-Shabaab ah ee Somaliland gala, durbadiiba waxaa wejiga uga qormaya ‘Al-Shabaab’ oo qofka ugu horreeya yaa garanaya oo ciidanka ammaanka u sheegaya.
Somaliland waa wilaayad Islaami ah oo Shareecda ku dhaqanta oo in la dhibaateeyo waa xaaraan. Dhiigga siyaasiinteeda, askarteeda, weriyeyaasheeda, shaqaalaheeda dowladda waa xaaraan oo lama mid aha kan kan ‘Wanlaweynta’.
Xafiisyada, hoteellada, iyo makhaayadaha Somaliland waa muqaddas oo lama qarxin karo.
Boowe, ma sidaasaa xaalku?
Boowe, haddiiba aad reer Somaliland tahayba, ismaad difaacin ee waad caytantay. Waxaad reer Somaliland ka shabbahdaa: dhirifka, caafdifad aan control lahayn, iyo aflagaaddo aan loo meeldayin. Boowe, intaasi waa sababta laguu dhegaysanwaayey ee aad 30ka sano aqoonsiga dowladnimo u weyday.
Waxaa lagu guulestey in gacanta lagu dhigo afar nin oo aad muhiim ah oo ka tirsana shabaabka Galgal, oo donaayey in ay qaraxyo Berbera la gala an; waxa kale la soo qabtey haweyneydii ka kireysay guri ku yaala Burco, waxa kale oo laqabtey qaraxyo badan oo la diyaargareeyey.Allaa mahadleh.
ALSHABAAB, MARNA SOMALILAND MA SALDHIGI KARTO, WAA KA FULIN KARTA DHIBAATO, BALSE KAMA DHIGAN KARTO GABOOD, WAAYO?
1- DADKA SOMALILAND QARIN MAAYAAN, CASHUUR SIIN MAAYAAN, WAANA SOO SHEEGAYAAN
2- DADKA SOMALILAND WAA HOMOGENIUS PEOPLE, WAA DAD ADDRESS LEH, OO IS WADA YAQAAN, MAAHA SIDA BOOSAASO IYO XAMAR AMA KISMANYO DHUL RAXANWEYN, GIBIL CAD, DAAYEER IYO DOOFAAR OO DHAN JOOGO.
3- DADWEYNAHA SOMALILAND , WAA ILAASHANAYAAN DHULKOODA, WAA SOO SHEEGAYANA, CUNTO SIIN MAAYAAN, GURI KA KIREYN MAAYAAN.
4- DADKA WAX QARXIYA OO U BADAN RAXAN-WEYN, SI FUDUD BAA LOOGA SOOCI KARAA DADKA REER SOMLAILAND OO LAHJAD IYO LUQAD KU KALA DUWAN YIHIIN.
5- DAACADNIMO CIIDANKA SOMALILAND OO AAN U NAXARIISAN DOONIN, SALDHIGNA INAY MEEL KA SAMAYSTAAN AY CAQLIGA GELI KARIN.
6- SOMLAILAND MA JOOGAAN SIYAASIYIIN ALSHABAAB AH IYO MADAX, SIDA FAHAD YAASIIN, IYO BOQOLLAAL XAMAR KA SHAQEEYA OO KU DHEXMILMAY MAAMULKA